Izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa kowaseMtuba | Scrolla Izindaba
Izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa kowaseMtuba
Celani Sikhakhane noLinda Ximba
UMbongeni Gina we-ANC noMxolisi Mthethwa we-IFP bamile kwelokuthi yibona abaphethe uMasipala waseMtubatuba KwaZulu-Natali.
UGina wakhethwa ngomhlaka-5 kuLwezi ngonyaka odlule kulandela ukhetho lohulumeni basekhaya.
Kodwa, ngalo lolo suku amakhansela e-IFP adala isiphithiphithi ekhala ngokuthi ozakwabo bavalelwe ngaphandle kwegumbi ukuze kungavotwa.
I-IFP isebenzise lokhu njengesizathu sokuyisa umphumela wokhetho eNkantolo.
Ngenxa yalokhu kuhlale umkhandlu kwabizwa uSomlomo uDipuo Ntuli ukuthi kuphinde kuvotwe. Kulokhu kuqokwe imeya eyehlukile uMnu uMxolisi Mthethwa we-IFP. Kodwa abaningi abayamukeli imphumela yalolu khetho.
I-ANC itshele i-Scrolla.Africa ukuthi umhlangano ubungekho emthethweni ngakho-ke uMbongeni Gina useyimeya entsha.
“Awukho umhlangano owake wabizwa nguSomlomo ukuze abize ukuhlala komkhandlu. I-IFP isebenzise umhlangano wayo ongekho emthethweni ukuze ikhethe iMeya ehambisana nayo,” kusho uVerus Ncaphalala uNobhala we-ANC esifundeni sase-Far North.
Khonamanjalo, uThami Ntuli we-IFP utshele i-Scrolla.Africa ukuthi iMeya uMxolisi Mthethwa useyiMeya yaseMtubatuba.
“I-ANC ayifuni ukuqonda ukuthi abantu baseMtubatuba bavotele i-IFP ngobuningi babo,” kusho uNtuli.
NgoLwesibili iNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ikhiphe incwadi evimbela iMeya ye-IFP esanda kuqokwa kodwa udaba luzobuyekezwa ngomhlaka-26 kuMasingana ukuze kulalelwe izimpikiswano ezigcwele.
UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana KwaZulu-Natal uMnu Sipho Hlomuka uye eNkantolo ngemuva kokuthi umumasipa uqoke iMeya ehambisana ne-IFP, iphini leMeya, usomlomo nebamba lomphathi kaMasipala emhlanganweni okuthiwa wawungekho emthethweni.
“Kuyasijabulisa ukuthi iNkantolo icheme nathi njengoba nayo ibone ukukhethwa kwabaphathi behhovisi eMtubatuba kungekho emthethweni. Umthetho weNkantolo usize ukubuyisela ukubusa okuyisisekelo, ukuphatha kanye nokulethwa kwezidingo kubantu,” kusho uHlomuka.